Kursiga Kid |
Kuraasta Kid, Kursiga Yar 1618 ...
Guddoomiyaha caaga F805 #
Shayga No: F805 #
Cabbirka Badeecada: 55 * 48 * 82.5cm
Waxyaabaha: Polypropylene Eco-friendly + Birta
Xirmo: 4pcs / ctn
MOQ: 200pcs / midab
Qiimaha Gaarka ah ee Farshaxanka Casriga ah ee Warshadda Qarsoon ee Warshadda - Forman
Masuuliyad heer sare ah oo heer sare ah oo qiimeynta deynta ah ayaa ah mabaadi'deena, taas oo naga caawin doonta booska sare. U hogaansanaanta mabaadi'da "bilowga hore, iibsadaha ugu sarreeya" ee Qiimaha Gaarka ah ee Shiinaha Shiinaha Caag Casaan ah PP Restaurant Coffee Bar Guddoomiye, Waxaan dammaanad qaadnay tayada, haddii dadka wax iibsanaya aysan ku faraxsanayn wax soo saarka 'tayo sare leh, waxaad ku laaban kartaa gudaha 7da maalmood ee asalka ah gobolada. Masuuliyad heer sare ah oo heer sare ah oo qiimeynta dhibcaha ah ayaa ah mabaadi'deena ...
Imaanshaha Dhawaan Kursiga Qolka Cunitaanka Dabaqyada - Kursiga Balaastigga ah 1681 # - Forman
Qiimaha hoose Jadwalka Wareegga - Miiska cuntada-T6 - Forman
Wax soo saarku wuxuu isku daraa bartamihii qarnigii qaabab casri ah iyo warshado leh qaabab naqshadeynta hadda jira si loo abuuro qaybo aan waqti lahayn oo si hufan u ammaanaya qurxin kasta. Shayga, Lugaha adag ee lugaha, ee ku yaal Caddaan wuxuu siinayaa taabasho casri ah meesha jikadaada wax laga cuno, ama goob kasta oo loo baahan yahay miis lahjad. Dusha sare ee alwaaxda cadcad ee jilicsan ayaa si iskumid ah isugu dhafan qurxin kasta halka miisaska lugaha miiska laga sameeyay alwaax adag oo dabiici ah isla markaana ay kujiraan rogrog dabaq lagu hagaajin karo oo kuu ogolaanaya inaad heer joogto un ...
Tayo Sare ee Kuraasta Jaban - KURSIGA BULSHADA - 1765 # - Forman
Ad Faa'iidadayada: Waxaan haynaa shahaadooyinka patent-ka inta badan alaabteenna. Waxaan ku siin karnaa warbixinta baaritaanka EN12520 badeecad kasta. Amarka OEM waa la heli karaa. Warshaddeena waxay leedahay shahaadooyin BSCI iyo SGS. Aqoon isweydaarsiyo aqoon isweydaarsi ah. Tayada sare & Adeegga ugufiican & Qiimaha Wanaagsan ● Warshadeena & Kooxdayada: Tianjin Forman Furniture waa warshad hogaamisa inta udhaxeysa waqooyiga Shiinaha oo la aasaasay sanadkii 1988 inta badanna bixisa kuraasta cuntada iyo miisaska. Forman wuxuu leeyahay koox weyn oo iibin leh in kabadan 10 xirfadle ...
Guddoomiyaha saaraha OEM - Guddoomiyaha caaga - F803 # - Forman
Shaxda Cuntada Cad ee alaab-qeybiye la isku halleyn karo - Miiska cuntada-T2 - Forman
Tianjin Forman Furniture waa warshad horseed u ah waqooyiga Shiinaha oo la aasaasay sanadkii 1988 inta badanna bixisa kuraasta cuntada iyo miisaska. Forman wuxuu leeyahay miisas ballaaran oo qurux badan oo miisaska lagu cuno ah. Haddii aad raadineysid naqshad casri ah oo ku habboon qol ka yar, ama miis weyn, miis dhaqameed leh meel loogu talagalay qoyska oo dhan iyo in ka badan, Forman waxaa lagugu khasbi doonaa xulasho. Miiska cuntada waa mid ka mid ah qalabka ugu muhiimsan gurigaaga - gaar ahaan agagaarka ho ...
Tayada tayada ugu fiican leh iyo Miiska Qaxwada Birta ah - Miis wareegsan, Yar, 2 Midab T-32 # - Forman
Miiska hareeraha wuxuu isku daraa muuqaal muuqaal leh naqshad shaqeynaya oo fudud. Naqshadeeye wuxuu rabay inuu abuuro miis saaxiibtinimo leh, xasiloon oo adkeysi leh kaasoo ka ilaaliya koobka kafee inuu dhulka ku dhaco - taasi waa sababta uu ugu abuuray gees yar miiska miiska. Miiska hareeraha wuxuu dadka ku casuumayaa inay isugu yimaadaan hareeraha meel kasta oo aad dhigato. Xajmiyada kala duwan ee miiska ayaa si wada jir ah isugu dhafan oo sidoo kale iskood ugu muuqda si weyn.
Warshadda si toos ah kuraasta Cunnada Degdega ah - Kursi caag ah-1698 - Forman
Kursigan uu naqshadeeye caanka ahi ka badan yahay uun kursi dhan-caag ah oo leh naqshad casri ah oo gaar ah. Waad ku mahadsan tahay boos kale oo horay loo sii jeedinayo, waxay kaloo bixisaa fadhiga ergonomic. Kursigani wuxuu ku yimaadaa midabbo aad u tiro badan. Waa la isku dhejin karaa waana sidoo kale 100% dib loo isticmaali karo. Qofna, marka uu fiirinayo kursiga balaastigga ah ee Forman, mala qiyaasi karo horumarka tikniyoolajiyadeed ee ay ahayd in la sameeyo si loo sameeyo qaybtaan ka mid ah alaabta guriga ka dhaba. Khadadka toosan oo ay weheliso curves nadiif ah mak ...
Miiska iibka kulul ee Miiska Qaxwada Madoow - Miis wareegsan, Yar, 2 Midab T-32 # - Forman
OEM / ODM Shiinaha Kuraasta Qolka Cunitaanka Casriga - KURSIGA BULSHADA - 1682 # - Forman
Kusoo dhawow nasashada.Nashqada waa nafta loogu talagalay kursi caag ah. Kursigani wuxuu leeyahay khadad xarrago leh oo dhaqameed oo sameeya hadal iyada oo aan la weyneyn meesha. Ku dheji kursigan qadada miiska wax lagu cunteeyo ee loogu talagalay qolka caadiga ah, fadhiga la safeeyey iyo aagaga wax lagu cuno Inta ugu wada wanaagsan, waxa ugu wanaagsan, maadooyinkeenu ma nuugaan qoyaanka waxayna diidayaan wasakhda iyo wasakhda, iyagoo nadiifinaya neecaw. Kala-goynta cuntada sidoo kale waa la iibsan karaa si loo sii balaadhiyo jadwalkaaga.Si aad u baarto dhammaan khadadka wax soo saarka si aad isugu dubariddo bea kale ...
2020 China New Design Garden Guddoomiyaha Kursiga Bannaanka - Qiimo Gaara loogu talagalay Shiinaha Caaga Casriga ah PP Restaurant Coffee Bar Guddoomiye - Forman